🍕 Cunto fudud & Pizzerias | Booqo Hultsfred
Pizza iyo cunto degdeg ah
Ku fiican dhammaan xaaladaha
Pizza-ku meel gaar ah ayay ku leedahay qalbiyadeenna, saxanka wanaagsana wuxuu dhawaan helay dariiqa uu u galo menu-yada kale ee aan ahayn kuwa talyaaniga ah. Hagahan waxa aanu ku soo ururinayna cunto bizzerias saafi ah iyo makhaayado ku yaala degmada Hultsfred oo u adeegta biisa qayb ka mid ah liiska cuntada.
Homeslice Pizzeria waxay ku taal bartamaha Virserum dhanka buundada
Kungen Restaurang wuxuu ku yaal bartamaha Hultsfred inta u dhaxaysa qorshaha Tor iyo Köpingsparken. The Restaurant King wuxuu bixiyaa pizzas, burgers, kalluun iyo chips iyo saladh. Waa u gaar ninkaas
Charlie Pizzeria oo ku taal Mörlunda waxay bixisaa biisas, burgers, barbecue iyo saladh. "Mörlunda pizza" waxaa kaliya laga heli karaa Charlie Pizzeria
Pizzeria waxay ku taal bartamaha Målilla. Marka lagu daro pizza, kebabs iyo saladh ayaa sidoo kale ku jira liiska. Labadaba in la dalbado oo la keeno ama la fadhiisto
Dhinacyada Vetlandavägen ee Målilla waxaa ku yaal Grill Bandy. Halkan waxaad ku kala dooran kartaa burgers, sausages, ballballs, kebabs, digaag. Xilliga kuleylaha waxaa jira barxad yar oo bannaanka ah.
Makhaayada iyo Pizzeria Emåbaren
Emåbaren waa makhaayad iyo biibiile. Cuntada guriga lagu kariyo ee guryaha lagu sameeyo ayaa halkan loogu diyaariyaa qadada inta udhaxeysa 1100-1400. Bedel ahaan saxanka maanta, waxaa jira pizza, saladh ama kebab.
Pizzeria waxay ku taal bartamaha Virserum. Halkan waxaad si fiican ugu cunaysaa dhismooyin wanaagsan. Restaurang Betjänten waxaad had iyo jeer ka heshaa adeeg wanaagsan iyo tayo wanaagsan. Waad awoodaa
Pizzeria waxay ku taal bartamaha Hultsfred. Marka lagu daro pizza, kebabs iyo saladh ayaa sidoo kale ku jira liiska. Xilliga xagaaga waxaa sidoo kale jira barxad dibedda ah. Waxaa jira 24
Pizzeria oo ku taal Hultsfred oo ku xigta Willys. Pizza, kebabs, gyros, saladhyada iyo burgers ayaa halkan laga helaa. Waxay bixisaa biisas aad u fiican, shaqaale saaxiibtinimo
Milano waa pizzeria oo leh ka-qaadasho iyo fursad ay wax kaga cuni karto goobta. Pizza, kebabs, falafel, burgers iyo saladh kala duwan ayaa halkan laga helaa.